Ndụmọdụ profaịlụ 10 nke LinkedIn maka ịga nke ọma na ịkparịta ụka n'|ntanet | Martech Zone
Ihe omuma a sitere na SalesforLife lekwasiri anya otu esi ejiko profaịlụ LinkedIn maka ire. Ọ dị mma, n'uche nke m, profaịlụ ọ bụla LinkedIn kwesịrị ịkwalite maka ire ya… na uzọ ọzọ gịnị kpatara ị nọ na LinkedIn? Uru gị n'ọrụ gị bara bara uru dịka netwọkụ ọkachamara gị.
Nke ahụ kwuru, ekwenyere m na ọtụtụ mmadụ na-emebi ma ọ bụ na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ na ọ bụghị na-achọpụta profaịlụ ha na LinkedIn. Otu omume m chọrọ ịkwụsị bụ ịnwa imekọrịta ndị ị na-amaghị. Amaara m na ị na-achọ itolite netwọkụ gị, mana ọkpụkpọ oku abụghị ụzọ isi mee nke ahụ. Jikọọ m site na mgbasa ozi mgbasa ozi, ka mkparịta ụka na-aga, mee ka m mara ihe kpatara njikọ gị nwere ike iji baa uru - ọ ga-abụrịrị na m jikọọ!
Ihe profaịlụ LinkedIn gị ekwesịghị ịbụ mmalite gị - ọ bụghị maka ihe ị rụzuru ma ọ bụ maka otu ị si egbusi oke. Kama nke ahụ, ọ kwesịrị ịbụ onye ahịa na-etolite, lekwasịrị anya na uru ọ ga - abara gị maka ọdịnihu na ndị ahịa. Zaa ajụjụ a: olee otu m ga - esi nyere ndị zụrụ m aka? Nke a bụ otu esi arụ ọrụ profaịlụ LinkedIn zuru oke maka ire ere.
Etu esi achota profaịlụ Njikọ gị
Ezigbo Foto - Anaghị m jikọọ katuunu ma ọ bụ oghere oyiyi. Ihu gị bụ njirimara kachasị amata ị nwere, tinye ya n'ịntanetị. M a graying, agadi, abụba Ih ... M ka na-etinye foto m online.
Isi okwu gi - Aha ọkwá anaghị enye uru ị wetara ndị ọzọ. Agafela n’elu ma biko egbula ọkwa ịbụ onye nde.
Kwusaanụ Ọdịnaya - Nye ndị ọbịa ọdịnaya dị mkpa ebe ha nwere ike ịchọpụta nka gị n’ime ụlọ ọrụ gị.
Mee ka Nchịkọta Gị Kwuo - Isi okwu gi jidere uche ha, ugbu a obu oge inye ufodu agba na oke oku ime ihe.
Kekọrịta Ọdịnaya Anya - Dika ndi nleta nyocha na peeji gi, nye ha ihe nlere anya nke na-ejide mmadu ma di iche na profaịlụ gi na ndi ozo.
Ahụmahụ na Nsonaazụ - Akụkọ ihe mere gị adịghị mkpa ihe dịka nsonaazụ ndị ị rụzuru n'ọnọdụ ndị ahụ.
Endorsements - Ọ bụ ezie na a na-ejikarị ha arụ ọrụ ma na-elelị ha, profaịlụ na-enweghị nkwenye na-ejide anya. Nweta nke gị!
Aro - N’adịghị ka endorsements, otu onye ọrụ na-ewepụta oge na-arụ a ọma kwesịrị nkwanye bụ incredibly bara uru.
Tinye akwukwo - you na -ekekọrịta ma na-ede ihe n’ebe ọzọ? Gbalia igbakwunye ngalaba ndi ahu na profaịlụ LinkedIn gi ka ndi obia nwee ike ichoputa ihe omuma gi.
Sọpụrụ & kwuo - Anyi bi n’uwa ebe nmekorita gi na ndi obodo gi bu ihe di nkpa n’ekpe udiri udiri mmadu bu. O buru na amarala gi, kene ya.
Hụ na ị na-elele profaịlụ gị dị ka ndị ọha na eze hụrụ yana site na njikọ ka ị nwee ike melite ma bulie profaịlụ gị. N'akụkụ aka nri, LinkedIn na-enye nlele nke ike profaịlụ gị… jiri ya! M ga-akwado nkwalite na ndenye aha akwụ ụgwọ na LinkedIn. Ewezuga ọdịiche dị na profaịlụ gị na ịbawanye visibilụ ya, ọ na-enye ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ iji chọpụta onye na-ele profaịlụ gị yana otu ị ga-esi enweta ndị ọzọ.
Tags: infographicọdịnaya jikọtaranjikọ endinAhụmahụ jikọtaranjikọ isiokwunjikarịcha njikọfoto jikọtaraprofaịlụ njikọnkwanye njikọahịa maka ndụahịa ndụ